मुटुका लागि कुन तेल राम्रो ? – shubhabihani
Home / स्वास्थ्य / मुटुका लागि कुन तेल राम्रो ?
मुटुका लागि कुन तेल राम्रो ?
Posted by: admin in स्वास्थ्य January 12, 2017	Comments 277 Views
मलाई धेरै नै मुटुका रोगीहरुले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन् – ‘कुन खानेतेलले मुटुलाई फाइदा गर्छ ?’
धेरै मानिसहरु खानेतेल, कोलेस्टेरोल र अन्य चिल्लो खाद्य पदार्थहरुकाबारे भ्रममा परेका देखिन्छन् । आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म बजारमा मुख्यरुपमा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । धेरैले तोरीकै तेलमा तरकारी पकाएर खाने गर्थे । शुद्ध चाहिदाँ र रोटी, पुरी पकाउदा गाई–भैंसीको घिउ प्रयोग हुन्थ्यो ।
यसैको फलस्वरुप मुटुका रोगीहरु अन्योलमा परेका छन् । यति धेरै थरी तेलहरुमध्ये कुनचाहिले मुटुलाई फाइदा गर्ला ? हामी मुटुरोग विशेषज्ञहरु भन्ने गर्छौं –‘चिल्लो पदार्थले मुटुलाई हानि पु¥याउछ, किनकि यसमा कोलेस्टेरोल र ट्राइग्लाइ–सेराइड हुन्छ । यी तत्वहरु मुटुको रक्तनलीभित्र जम्न गई रक्तनलीलाई साँघुरो बनाइदिन्छन्, फलस्वरुप रक्त सञ्चारमा बाधा उत्पन्न भई हृदयघात हुनपुग्छ ।’
बडो अन्योलको स्थिति छ । एकातर्फ फलानो तेल ‘शतप्रतिशत कोलेस्टेरोल फ्री, मुटुलाई राख्छ स्वस्थ’ भन्दै टेलिभिजनको रङ्गीन पर्दामा सिनेमाको हिरो, हिरोइन तथा खेलकुद जगतका चर्चित खेलाडीहरु उफ्रने गर्छन् भने अर्कोतर्फ ‘तेल र चिल्लो नखा, मुटु बिग्रेला’ भनी डाक्टरहरुले सावधान गराउँछन् । आखिर बिरामीले कसको कुरा मान्ने ?
मैले उनका बाबुलाई तत्कालै सोधें – ‘बच्चालाई किन मासु, घिउ खान नदिएको ?’ उनले जवाफ दिए – ‘मासुमा कालेस्टेरोल हुन्छ । चिल्लो पदार्थले मुटु बिगार्छ । घिउले हार्ट अट्याक गराउँछ । मुटुरोगीले चिल्लो र कालेस्टेरोल भएको खाना खानुहुँदैन । यसै कारण मैले मुटुरोगी छोरालाई मुख बार्न लगाएको हुँ ।’
उनको जवाफ सुनेर म झसङ्ग भएँ । कत्रो ठूलो गल्ती भइराखेको रहेछ । बाथ मुटुको रोग भएको बालकले चिल्लो र मासु किन बार्नुप¥यो ? मजासँग खाए भइहाल्छ नि ? यो त हृदयघात सम्बन्धी कोरोनरी मुटुका रोगीहरु, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि भएकाहरुले बार्नुपर्ने कुरा हो ।
मुटुको रोग भन्दैमा सबै एकैथरी कहाँ हुन्छ र ? यस प्रकार अज्ञानताको शिकार भएका धेरै नै मुटुरोगीहरु भेटिन्छन् । कसैले चाहिने बेलामा चिल्लो पदार्थ बारेका हुँदैनन् भने कसैले अनावश्यकरुपमा चिल्लो पदार्थको प्रयोग रोकेका हुन्छन् । विचरा किशोर आफ्नो बाबुको अज्ञानताका कारण घिउ र मासु खानबाट बञ्चित हुनपुगे ।
अनस्याच्युरेटेड फ्याटी एसिडको एउटा बडो राम्रो गुण छ । मनो र पोली अनस्याच्युरेटेड फ्याटी एसिडले रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रालाई घटाउन मद्दत पुयाउँछ । यसका साथै वनस्पति तेलमा भएको लिनोलेइक फैटी एसिडले पनि रगतमा कोलेस्टेरोलको मात्रालाई घटाउन मद्दत पु¥याउँछ । कुनै तेलमा यो बढी हुन्छ त कुनैमा घटी हुन्छ । यी लाभदायी तत्वहरुबाहेक तेलले रगतमा ट्राइग्लिसेराइड बढाउने, हृदयघातक कालेस्टेरोलको उत्पादन बढाउने आदि नकारात्मक असरहरु प्रशस्त पार्दछ । आमजनतालाई यो कुरा जानकारी नभएको हुनाले तेल उत्पादक उद्योगहरुले यसको फाइदा उठाउने गरेका छन् ।
एउटा साधारण उदाहरणः विदेशबाट आयात गरिएको धेरैले प्रयोग गर्ने सूर्यमुखी तेलको सिसीलाई हेरौं । त्यसमा बाहिर ठूलो अक्षरमा लेखिएको हुन्छ– शतप्रतिशत कोलेस्टेरोल फ्री । कुरा एकदम ठीक हो, किनकि कुनै पनि वनस्पति तेलमा कोलेस्टोरोल पाइँदैन । स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले छापेको छ ।
कोलेस्टेरोल जन्तुबाट उत्पादन हुने चिल्लो पदार्थमा मात्र पाइन्छ । सूर्यमुखी तेलमा कालेस्ट्रेरोल हुँदैन । त्यसमा ९५ प्रशित फ्याटी एसिड हुन्छ, जसमध्ये ११ प्रतिशत स्याच्युरेटेड, ३४ प्रतिशत मोनो अनस्याच्यरेटेड र ५० प्रतिशत पोली अनस्याच्यरेटेड रहेको हुन्छ । यो पक्षलाई पूर्णरुपले गोप्य राखेर ‘कालेस्ट्रेरोल फ्री’ भन्ने शब्दलाई जोडतोडका साथ प्रचार गरिएको हुन्छ । हाम्रो जे देख्यो, जे सुन्यो, त्यो पत्याउने वानी छ । फेसन भइसक्यो विदेशबाट आएको सूर्यमुखीको तेल खाने चलन सहरबजारमा ।
चिल्लो पदार्थ चाहे त्यो तेल होस् वा घिउ, शरीरका लागि आवश्यक पदार्थ हो । तेलमा कोलेस्टेरोल हुँदैन तर अनस्याच्युरेड फ्याट बढी हुन्छ भने घिउमा कालेस्टेरोल र स्याच्युरेटेड फ्याट बढी हुन्छ । कालेस्ट्रेरोलबाट शरीरमा केही हर्मोनहरु र पित्तरस बन्छ । साथै स्नायुहरुको कार्य सञ्चालनमा यसको आवश्यकता पर्छ । आवश्यक भन्दा बढी भएमा कोलेस्ट्रेरोल रक्तनलीहरुभित्र गएर जम्छ ।
Previous: सांसद खतिवडाले घडी चोरेकै हुन् त ? घडी मालिकको बल्ल आयो बयान
Next: ‘डन’ दिपक मनाङ्गे राप्रपामा प्रवेश